Koobka shukulaatada, kareemka iyo looska | Bezzia
Haddii aan kuu sheego inaad macmacaankan ku sameyn karto 10 daqiiqo, ma rumaysan doontaa? Koobkan shukulaatada, kareemka iyo looska waa a beddel weyn marka aan martida ku haysanno guriga. Waan ka tagi karnaa salka shukulaatada la sameeyay oo waxaan ku darnaa ka hor inta aan u adeegin inta hartay ee ka kooban.
Immisa ayey kugu kacaysaa inaad diyaarsato muraayadaha indhaha? Qiyaastii 10 daqiiqo. Kadib, waa inaad u ogolaataa inay ku qaboojiyaan heerkulka qolka ama ku hay qaboojiyaha haddii aadan cunayn isla maalintaas. Mousse shukulaatada Waa mid aad u jilicsan oo keligiis ayaa la adeegsan karaa, laakiin kareemka iyo looska ayaa gacan ka geysta in macmacaankan laga dhigo mid wareegsan.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan ku darista looska macmacaankan ayaa ah farqiga cusbada in kuwani ay gacan ka geystaan ​​macmacaanka. Iyo taabashada ciriiriga ah ee ku saabsan looska duban ee loo isticmaalo dusha sare. Laakiin haddii lawsku uusan ahayn waxaaga, xor u noqo inaad ku darto dhowr xiiro oo shukulaato ah, kookaha ama qorfe dusha kareemka.
1 Waxyaabaha ay ka kooban tahay 1 koob
Waxyaabaha ay ka kooban tahay 1 koob
200 ml oo caano ah ama cabitaanka yicibta
9 g. galleyda
10 g. kookaha saafi ah
Afarta maado ee ugu horeysa ku rid baaquli: cabitaanka yicibta, galleyda, sonkorta iyo kookaha. Kadib, ku qas qaar ka mid ah ulaha gacanta lagu qaato ilaa dhammaan maaddooyinka ay si fiican isugu dhafan yihiin.
Weelka u qaado microwave-ka oo wuxuu kululaayaa daqiiqad ugu badnaan awoodda. Ka dib ka qaad oo ku walaaq ulaha intaadan dib ugu celin microwave-ka. Ku celi qalliinka marar badan inta lagama maarmaanka u ah hadda oo ku garaaca garaac 30 ilbiriqsi ah illaa inta isku dhafka ay ka sii adkaanayaan. Xaaladdayda waxay ahayd 4 daqiiqo wadar ahaan.
Mar hadaan dhumuc dhigay ku shub dhalada galaaska oo heerkulka qolka ha ku qaboojiyo.
Marka mousse kookaha uu qabow yahay, ku qurxin kareemka la dubay, xoogaa dun ah oo subagga looska, qorfaha iyo looska la dubay.
Ku raaxayso galaaska shukulaatada, kareemka iyo looska macmacaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Recipes » Postres » Koobka shukulaatada, kareemka iyo looska